दोब्वरले बढ्दै को`रोना संक्र`मण, तेस्रो लहर सुरु भएको विज्ञको आँकलन – Purba Aawaj
दोब्वरले बढ्दै को`रोना संक्र`मण, तेस्रो लहर सुरु भएको विज्ञको आँकलन
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २९, २०७८ समय: १९:३९:२०
काठमाडौं । विश्वभर ओमि`क्रोनको जो`खिम बढिरहेका बेला नेपालमा समेत संक्र`मितको संख्या कहा`लीलाग्दो ढङ्गमा बढेको छ ।
१ प्रतिशतमा झरिसकेको संक्र`मणदर हाल २३ प्रतिशतसम्म पुग्दा देशभर करिव १५ हजार संक्रि´य संक्र`मित पुगेका छन् । ५ दिनमा संक्र`मण दोब्वर बढ्दा अस्पतालमा संक्र`मितको चाप उल्लेख्य बढेको छ ।
नेपालमा को´रोना संक्र`मितको संख्या उकालो लाग्न थालेसँगै अस्पताल भरिन थालेका छन् । पुस १५ देखि केही बढ्न थालेको संक्र´मण पुष २५ सम्म पुग्दा ९ प्रतिशत माथि पुग्यो । २६ गते १२ दशमलव ६, २७ गते १६ दशमलव २ पुगेको संक्र´मणदर २८ गते २३ दशमलव ५८ प्रतिशत पुग्यो ।
यस्तै २९ गते पनि २३ दशमलव ५५ प्रतिशतमा संक्र´मण देखिएको छ । प्रत्येक दिन औसतमा ५ सयले बढ्न थालेको संक्र`मितको संख्याले अबको केही समयमा नै अवस्था भया´वह बनाउने देखिन्छ । संक्रा´मक रो´ग विशेषज्ञ डा. जनक कोइराला, दैनिक २ सय पुगेको सं´क्रम´ण क्रमशः बढ्दै जानुले तेस्रो लहर सुरु भएको आँकलन गर्नुहुन्छ ।
तर, नेपालमा हाल फैलिरहेको संक्र`मण ओ´मि´क्रोन नै हो कि यसअघि देखिरहेको डेल्टा भेरियन्ट हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन । यद्यपि ओमिक्रोन भेरियन्टको सं´क्रम`णपछि १ जनाले १० जनासम्म संक्रमण पु¥याउने सक्ने क्षम`ता राख्छ ।
नयाँ भेरियन्टले दोस्रो लहरमा जस्तो फोक्सोमा अक्सिजनको मात्रा घटाउने र निमो`निया बनाउने नदेखिए पनि श्वासप्रश्वासमा असर र घाँटीमा सम`स्या हुने देखिएको छ । खोप नलगाएको व्यक्तिमा भने लगाएको व्यक्तिको तुलनामा १० गुणा बढी असर, अस्पताल भर्ना हुने दर १७ गुणा र मृत्यु हुने सम्भावना २० प्रतिशत बढी हुने पाइएको संक्रामक रोग डा. कोइरालाको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशको संक्रा,मक तथा सरुवारोग अस्पतालमा समेत संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचन, कास्कीबाट बढी संक्र,मित आइरहेको बताउनुुहुन्छ । दुई हप्ताअघि दुई जना मात्र संक्रमित अस्पतालमा भर्ना भएकोमा अहिले संक्र,मितको भर्नादर ह्वात्तै बढेको उहाँको भनाइ छ ।
बढ्दो क्रममा रहेको संक्र,मणदरले तेस्रो लहर भित्रिसकेको संकेत गरेको छ । देशभर स्मार्ट लकडा,उन भनिए पनि सबैतिर बढ्दो भीडभाड र बेवास्थाले दोस्रो लहरभन्दा भ,या,वह नहोला भन्न सकिन्न । इमेज खबर बाट
Last Updated on: January 13th, 2022 at 7:39 pm